HGH Thailand ahịa ọgwụ na-enye nnyefe n'efu nke HGH ngwaahịa
Site HGH Thailand November 13, 2017
HGH Thailand ahịa ọgwụ na-enye nnyefe nnyefe nke Genotropin na ngwaahịa HGH ndị ọzọ na mpaghara Thailand
Izipu ozi na Bangkok - anyị na-ere ọgwụ na-anata iwu si 9: 00 am - 8: 00 elekere, iwu enyere tupu 3: 00 pm ga-ewepụta otu ụbọchị.
Ihe natara nyere 3: 00 n'ehihie ka a ga-edozi ya N'echi, nnyefe niile si na 9: 00 gaa 3: 00 pm.
Na-eziputa ozi na ịkwụ ụgwọ ego na Bangkok. Anyị na-ezite uto hormone site na ụgbọ elu ụgbọ elu gaa Chiang Mai, Phuket.
Gwa ozi na Pattaya, Hua Hin, Udon Thani, Koh Samui, Koh Chang, Suratkhani na obodo ndị ọzọ na ógbè nile nke Thailand.
Olee otú m pụrụ ịtụ?
Mgbe ị mechara mee ihe na weebụsaịtị anyị site na nkata ma ọ bụ site na onye ndụmọdụ na weebụsaịtị, kwadoro adreesị na oge nke iwu ahụ, onye ozi anyị malitere itinye iji kwadebe nkwakọba nke hormone.
"Biko hapụ ozi kọntaktị ị kpọtụrụ gị, E-mail, ekwentị
nọmba ma ọ bụ Whatsapp, Line, Viber (ọ bụrụ na enweghị nọmba Thai) ".
Nkwado na akụrụngwa
Anyị ga-etinye Genotropin na arịa ọgwụ na ice, ka nọgide na-echekwa okpomọkụ kachasị mma maka nchekwa nke hormone 2-8 ogo.
Ihe ntinye gụnyere (n'efu):
BD Ultra Fine Penles (40 iberibe) maka nke ọ bụla pen
Mgbe ị kwadoro usoro ahụ, onye ozi anyị ga-akpọtụrụ gị 1-2 awa tupu ịbịa (iji gosi usoro gị)
Onye ozi ahụ ga-enyefe ụlọ gị, ụlọ nkwari akụ, ebe obibi ma ọ bụ ebe mgbakọ (dịka ọdụ ụgbọ elu na ndị ọzọ)
Mgbe ị natara iwu ị ga-akwụrịrị onye ozi ahụ ego (anyị na-anakwere naanị Thai baht).
Ngwaahịa Genotropin ngwaahịa na-ewe 1-2 ụbọchị Phuket na Chiang Mai.
Ruo ugbu a, anyị anaghị eme ka ndị ozi gaa Chiang Mai na Phuket (gbanwee nkọwa nke ọkachamara na nnyefe ọzọ nhọrọ).
Nwee hormone na-eto eto na Phuket ma ọ bụ Chiang Mai site na ụgbọ elu ụgbọ elu
Kedu otu esi etinye usoro n'usoro na Phuket na Chiang mai?
Mgbe ị na-etinye iwu gị site na nkata ọkachamara na mkpokọta, ekwentị ma ọ bụ email
"biko gosipụta ezigbo aha na aha ikpeazụ iji nata iwu na
nkọwa kọntaktị "
Anyị ga-eziga gị nkọwa ụlọ akụ anyị maka ịkwụ ụgwọ, nkwenye nke adreesị adreesị, mgbe ahụ, anyị ga-akpọtụrụ gị site na ekwentị maka ịga n'ihu nkọwa.
Mgbe anyị natara ụgwọ na akaụntụ akụ anyị. Onye ozi anyị site na 9: 00 am ka 8: 00 pm ga-eziga gị n'ọdụ ụgbọ elu na Bangkok na ọgwụ akpa na ice, site na nnyefe ọrụ nke ụgbọelu Thai Airways ibu na Thailand. Anyị na-edejupụta akwụkwọ ndị dị mkpa, aha na aha nnabata nke onye nnata, yana obodo na ọdụ ụgbọ elu ebe onye ahịa nwere ike ịnata iwu ya. N'iji ụgbọelu mbụ zitere iwu niile.
Kedu otu esi enweta iwu?
Ịnakọta usoro a dị mfe, naanị ị ga-aga n'ọdụ ụgbọelu, Ọnụ ego ụgbọ elu, tinyere paspọtụ ma ọ bụ kaadị id iji nweta usoro gị. I kwesịrị inye onye ọrụ nke nnyefe nnyefe ikuku ụgbọelu na nnata maka iwu gị.
Ntinye nke Genotropin na Hua Hin, Pattaya na obodo ndị ọzọ na mpaghara
nke Thailand (1-3 ụbọchị)
Nnyefe na Hua Hin, Pattaya na obodo ndị ọzọ na mpaghara Thailand emere site na iji ego eji eme ihe site na iji EMS gosiputa Thailand. Mgbe ị natara ntụziaka site na onye ndụmọdụ na weebụsaịtị ma ọ bụ ndepụta akara (Aha aha na kọntaktị kọntaktị) Anyị ga-eziga nkọwa maka ịkwụ ụgwọ akaụntụ akụ Thai anyị. Mgbe nnata nke ugwo, onye ozi anyị ga-edozi uto nkwakọ ngwaahịa ahụ hormone na nkwakọba ọgwụ maka iziga onye ahịa. Izipu na-esi na 9: 00 gaa 8: 00 pm site na EMS gosipụta Thailand post ọrụ (ọ na-ewe ụbọchị 1-3 dabere na adreesị ozi-e)
Mgbe anyị zipụrụ, anyị ga-ezite gị nọmba nchịkọta nke usoro gị, gị ga-anata ya mgbe ị na-ekwu okwu n'ọnụ ụzọ.
Kedu ka esi mee ka e nyefee gị na ụlọ akụ na Thailand?
Nnyefe ego bụ ụzọ kacha mma a pụrụ ịdabere na ya na ịkwụ ụgwọ ngwaahịa na ọrụ na Thailand, maka ịmefe gị naanị mkpa mara nọmba akaụntụ na ndị na-erite uru n'ụlọ akụ.
A na-enyefe ya na ATM ọ bụla site na iji ntinye ego n'ime ATM na ịkọ nọmba nọmba akaụntụ ahụ.
Enwere ike ịmefe ya site n'aka ụlọ akụ, maka mfe,
gwa onye ndụmọdụ na ụlọ akụ ahụ na ịchọrọ ịnyefe ya
weghara ihe karịrị 15 nkeji.
Hey. Ezitere m nseta ihuenyo. Ị nwetara ya?
Ee, n'aka na ọfịs anyị na Bangkok
ego ntanetị site na kaadị akwụmụgwọ adịghị
Enwere m ike ịkwụ ụgwọ site na kaadị akwụmụgwọ?